दलान नेपाल : दुई चार ओटा कुर्सी भांचिनु ठुलो कुरो होईन - सभासद उमेश यादव
तपाई हरुको के आक्रोश हो र ?
- हामी सदियौ देखि पिछडिएको समुदायहरु संविद्यानसभावाट आफनो हक अधिकार पाउछौ भनेर बसेको वेला सतारुढ दलहरु ०४७ भन्दा पनि पछाडी फर्कर नयां संविद्यान जारी गर्ने प्रयासमा छन । के हामीलाई तपाईले चुप लागेर बस्न भन्नु हुन्छ ।
त्यसकै लागी त तपाईहरुलाई संविद्यानसभामा पठाएको हो नि ?
- हो, हामीलाई जनताले त्यसकै लागी त्याहा पठाएका छन । तर याहा काग्रेस र एमाले अर्कौ खेलमा लागेको मात्रै होईन काम नै तमाम गर्ने सुरसारमा छन । हामीले त्यसलाई प्रतिवाद गरेर रोकेका मात्रै हो ।
तर काग्रेस एमाले ले त अझै दुई तिहाईको प्रक्रियावाट नयां संविद्यान जारी गर्छौ भनीरहेका छन नि ?
= सहमती विना प्रक्रिया सुर हुन सक्दैन । हामीले पनि सहमती गरेर प्रक्रियामा जाऔ भनेका छौ । तर हाम्रो स्वाममित्व विना नयां संविद्यान जारुी गर्ने प्रयास भयो भने हामी त्यउही भित्र पनि वलीदानी दिन तयार छौ । त्यती कुरा बुझीराख्नुस ।
मंगलवार विहान संविद्यानसभामा तपाईले उचालीरहेको कुर्सी त्याहा कुनै सभासद वा मर्यादापालकको ज्यानमा खसेको भए के हुन्थ्यो ? यसो विचार गर्नु भाको छ ?
- हेर्नुस, हामी पागल पनि होईन के हामीले कसैको ज्यान माथी त्यो कुर्सी फाल्थ्यो । त्याहा भित्र हामी आफनो आक्रोश मात्रै पोखेका हौ ।
आज संविद्यानसभाको बैठकम जादा केमा बस्नु भयो ?
- कुर्सीमा बसे नि । नयां कुर्सीको व्यवस्था भईसक्या थियो ।
तर आज उक्त घटनाको छानविन समिती बन्या छ नि, तपाईहरुको तलवभतावाट क्षती पुर्ती भराउने कुरा छ त ?
हेर्नुस, हाम्रो सभामुख त्यती अपरिपक्व हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
- हामी अन्तिम सम्म सहमतीकै आधारमा सवै उत्पीडित जनताको पक्षमा संघिय नयां संविद्यान बनाउन लागी पर्ने छौ ।
फेरी प्रतिकार हुन्छ कि ?
- त्यो सतारुढ दलहरुले गर्ने व्यहवारमा भर पर्छ ।